हिम्म तवाली करूणा डोजर अपरेटर चारै तिरबाट हण्डर खाएपछि यस्तो काम गर्दै (भिडियो सहित) – Ap Nepal
April 6, 2021 607
भि’र पा’खा मा डोजर चलाउने साहसी महिला करुणा अहिले मिडियामा आएकी थिइन्। हेर्दा उनि जति सुन्दर देखिन्छिन त्यो भन्दा धेरै उनको उनको दुख छ। धेरै पैसा कामाई आफ्नो बुबा आमा लाई सुख दिन्छु भनेर लागेकी करुणाले एक आफ्नै रेस्टुरेन्ट खोलिन। आफ्नै लगानीमा पैसा सर-सापटी गरि उनले ठुलो लगा’नीमा रेस्टुरेन्ट खोले लगत्तै देश ल’क’डाउन मा पर्यो।
लगभाग १ बर्ष सम्मको लकडा’उन बर्ष ले करुणालाई यस रेस्टुरेन्टले डुबायो। घरबाट पनि धेरै कुरा हरु सुन्नु पर्यो , काठमाडौँ बस्ने करुणा करिब २ घण्टा को समय लाग्ने बाटो ख’निरहेकी छिन्। दोलखा घर भएकी करुणा मा धेरै सपना हरु थिए तर आफ्नो परि’स्थितिले गर्दा यस्तो काम गर्न बा’ध्य भईन। ल’क’डाउन भएपछि रेस्टुरेन्ट को भाडा पनि तिर्न नसके पछि घरबेटी लाई चाबी दिएर निस्किएकी थिइन्।
केहि उपाय नलागे पछि करुणा कुबेत जाने निर्णय गरिन , काठमाडौँ बसपार्क मा हिड्दै थिइन् त्यसै क्रम मा उनले डो’जर चलाउनको लागि तालिम सीकाइरहेको थियो। म त्यहाँ सम्पर्क गरे मलाई सबै सिकाउनु भयो र मैले लाइसेन्स पनि लिकालेको छु। म एक छोरि ले डो’जर चलाएको छ भनि अहिले सम्म थाहा पाउनु भएको छैन। मैले अहिले सम्म कसैलाई भनेको छैन , मलाई मेरो परिवारले यो काम गा’र्हो छ नगर भन्नु भयो भने मेरो पाईला रोकिन्छ भनेर भनेको थिएन।
अब भने म राम्रो संग काम गर्न सक्छु घर मा बुबा आमा सबै भन्छु मैले यस्तो काम गरेको छु भनेर। म यस काम मा कुनै रहर ले आएको होइन यो मेरो बाध्य हो भन्दै करुणा धेरै रोहिन। बुबाआमा छोरि ले छल गरेर यस्तो काम गरि भनेर मन न’दुखा’उनु होला मैले सधै राम्रो गर्ने छु।
Prevनेपालमा भर्खरै ५.४ म्याग्निच्यूडको भूकम्प , केन्द्र विन्दु क हाँ ?
Nextतपाँईलाई थाहा छ ? अल्सर बिग्रिए घा’तक हुनसक्छ, हेर्नुहोस् अल्सरका ७ लक्षण र बच्ने उपाय सहित ।
सुनिता बुढा र मानसिङ् खड्का एकसाथ मि; डियामा,दोहोरी च्याम्पियनबाट आउट भन्छन्: ”जजहरुले अन्याय गरे” (भिडियो कुरा कानी)